Zavamaniry afangaro amin'ny làlana
Zavamaniry fikosehana beton-tanana
Fiantsonan'ny finday misy siny
fototra simenitra maimaim-poana ba ...
Fehikibo vita amin'ny beton ...
Aza miala amin'ny zavamaniry fanaovana beton
Ny zavamaniry dia misy rafitra famonoana, rafitra fandanjana, rafitra fampifangaroana, rafitra fanaraha-maso herinaratra, rafitra fanaraha-maso pneumatika sns ... Fivoriambe telo, vovo-dronono iray, fametahana ranon-javatra iray ary ny rano dia azo esorina ary afangaro amin'ilay zavamaniry.
Ny zavamaniry dia misy rafitra famonoana, rafitra fandanjana, rafitra fampifangaroana, rafitra fanaraha-maso herinaratra, rafitra fanaraha-maso pneumatika sns sns agregates, vovoka, additive ranon ary rano dia azo esorina ary afangaro amin'ilay zavamaniry.
Fivoriambe sy fandroahana mora azo, fivezivezena avo lenta amin'ny fifindrana, mety sy haingam-pandeha ary mifanaraka amin'ny toerana misy azy tanteraka.
fototra fototra batching zavamaniry
Rafitra maimaim-poana amin'ny fototra, azo apetraka amin'ny famokarana ireo fitaovana aorian'ny fisavoritahana sy hamafisana ny sehatry ny asa. Tsy mampihena ny vidin'ny fananganana ifotony fotsiny, fa mampihena ny tsingerin'ny fametrahana
Zavamaniry fitetezana haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha
Ny fampiasana ny mixer tena mahomby, ny fahombiazan'ny famokarana avo lenta, ny fanohanana ny teknolojia famahanana karazana maro, mety amin'ny filan'ny fangaro amin'ny beton isan-karazany, ny tabilao sy ny lelany dia mampiasa fitaovana maharitra mahatohitra, miaraka amin'ny androm-piainana lava.
Mpihinana marindrano dia karazana mpampita pneumatika manana firafitra mandroso, manana fahombiazana avo lenta amin'ny famoahana amin'ny alàlan'ny fampiasana teknolojia famahanana tsindry sy tsindry ary fandriana mitafo tsy manam-paharoa.
SjGJD060-3GStepped Type maina Mortar batching plant
SjGJD060-3G fitaovana miady amin'ny rihitra maina dia manana rafitra miorina amin'ny dingana, izay manana toetra mampiavaka ny famokarana lehibe, fitoniana ary azo itokisana ary azo ampiasaina amin'ny fampifangaroana ny rihitra maina tsotra sy ny rihitra maina manokana.
[Kopia] Mpisaraka fasika
Fandraisana an-tanana ny haitao mampitambatra ny fisarahana amponga sy ny fitiliana ny spiral ary ny fisarahana ary ny fanokafana ny fisarahana amin'ny sandstone; miaraka amina rafitra tsotra, ny fisarahana tsara, ny vidiny ambany ary ny tombotsoan'ny fiarovana ny tontolo iainana.
Shantui Janeoo dia namolavola sy namokatra mixer an'ny kamio vita amin'ny beton nanomboka ny taona 1980. Izy io dia nanangona traikefa manan-karena amin'ny famolavolana, ny famokarana ary ny serivisy aorian'ny fivarotana.
SjGTD060-3G Tower Type Mortar Batching Plant
Sjgtd060-3g fitaovana famaohana rihitra maina dia mandray ny firafitry ny tilikambo, miaraka amin'ny famokarana lehibe, ny fitsitsiana angovo ary ny fiarovana ny tontolo iainana, ny toetrany azo antoka sy azo antoka, izay ampiasaina amin'ny fampifangaroana ny fotaka maina tsotra.